News na ihe omume na Suppliers & Factory - China News na ihe omume na Manufacturers
Mechiri emechi akaghị ngwakọ n'itinyekwu moto
Customizing ngwakọ n'itinyekwu moto
High nkenke ngwakọ n'itinyekwu moto
High ọsọ ngwakọ n'itinyekwu moto
IP65 ngwakọ n'itinyekwu moto
Eme abụọ-adọ ngwakọ n'itinyekwu moto
Atọ-adọ ngwakọ n'itinyekwu moto
American akpaaka Technology Expo / West Òkù
site ha na 18-06-12
On February 5th na 7th, 2019, anyị ụlọ ọrụ ga-isonye na American akpaaka Technology Expo / West. The ulo-ǹdò-emi odude ke Anaheim Convention Center na California. Akpaaka Technology Expo West bụ North America kasị ukwuu elu imewe na n'ichepụta ihe omume. Ngosipụta nke ...
2018 SPS IPC draịva Òkù
site ha na 18-06-11
Si November 27 ka 29th, 2018, anyị ụlọ ọrụ ga-isonye na 2018 SPS IPC draịva Nuremberg Electric akpaaka ngosi, Germany. Booth ọnọdụ: Ụlọ Nzukọ 3, 3-414. Anyị ji obi ụtọ na-anabata ka ị gaa na anyị ụlọ ndò ma na-atụle imekọ ihe ọnụ.
CCTV 9 N'ajụjụ ọnụ na-akụkọ PROSTEPPER guzobere Iso
site ha na 17-11-11
Na October 2017, CCTV 9 Discovery Craftsmen si Mind-Building Group gbara ajụjụ ọnụ na filming mmemme "Ịdị Nkọ Eme Small Motor VS eleru na Ndị Man", ikpughe akụkọ nke omenkà nke Mr. Ding Xuhong, nchoputa nke Changzhou Prostepper Co., Ltd . The film enyoba craftsmans ...
Changzhou PROSTEPPER A APPROCHING TO mma na-aga nke ọma ga-eme n'ọdịnihu
site ha na 16-05-30
Na May 2016, Changzhou PROSTEPPER CO., LTD. kwagara ọkọlọtọ n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke Building B2 na Hutang Science and Technology Industrial Park, Changzhou City. Mkpokọta mmepụta ebe ruru 10,000 square mita, ugbu a, ihe karịrị 100 tent nke akpaka lathe, akpaka egweri igwe na ...
B2, Hutang ulo oru Park, Hutang Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu Province, China
News na ihe omume
American akpaaka Technology Expo / West ...
CCTV 9 N'ajụjụ ọnụ na-akụkọ PROSTEPPER ...